नारायण गोपालको चर्चित अति दुर्लभ अन्तरवार्ता ! «
नारायण गोपालको चर्चित अति दुर्लभ अन्तरवार्ता !
प्रकाशित मिति : १८ भाद्र २०७५, सोमबार १२:१७
तपाईं गीत किन गाउनुहुन्छ? पैसाका लागि, प्रतिष्ठाका लागि, आत्मसन्तुष्टिका लागि, के को लागि? मैले गाउन कुनै लक्ष्य बनाएर सुरु गरेको होइन। मेरा पिताजी आशागोपाल गुरुवाचार्य एक नामुद सङ्गीतकार र गायक–उस्ताद हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो घरको बैठकमा प्रायः सधैँ सङ्गीतको महफिल जमिरहन्थ्यो। केटाकेटी अवस्थामै म त्यो महफिल बेलाबेलामा जान्थेँ र गीतहरु सुन्थेँ।
यस यात्राको क्रममा अाज जहाँ पुग्नुभएको छ, त्यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? जनता अर्थात् श्रोताहरुबाट मैले जुन स्नेह र सम्मान पाएको छु, त्यसबाट म सन्तुष्ट छु। यदि आर्थिक उपलब्धिको दृष्टिले हेर्ने हो भने चाहिँ सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको कुरा गर्नु नै व्यर्थ छ। सरकारी क्षेत्रबाट पाउने सहयोग बिल्कुलै नगन्य छ, एउटा गीत गाएको ४०–५० रुपैँया पाइन्छ। आजकल ७५ रुपैँया छ क्यार। एउटा कलाकारले हप्तामा एउटा गीत रेकर्ड गरायो भने पििन महिनाको सरदर ३०० रुपैँया पर्यो।
रेडियो नेपालमा गीत रेकर्डिङ र प्रसारणमा पक्षपात र धाँधली हुन्छ भन्ने सत्य हो? पक्षपात र धाँधलीभन्दा नराम्रो कुनै शब्द छ भने त्यो पनि त्यहाँ हुन्छ। त्यहाँ पनि एउटा गिरोह छ। २–४ दिन तपाईं नियमित रुपले रेडियो नेपाल सुन्ने गर्नुस्, प्रायः हरेक दिन उहीउही कलाकारहरुको गीत बजेको पाउनुहुनेछ। तिनीहरु आफू र आफ्ना मान्छेबाहेक अरुको गीत बज्नै दिँदैनन्।
रत्न रेकर्डिङ संस्थाले आफ्नो दायित्व कतिको पूरा गरेको छ? तत्कालीन श्री ५ बडामहारानी रत्नराज्यलक्ष्मीदेवी शाहबाट नेपाली कलाकारहरुको गीतको राम्रो रेकर्डिङ होस् भनी आफ्नो निजी कोषबाट रुपैँया बक्स भै सँस्थाको स्थापना गराइबक्सेको हो। तर आज यो संस्था गीत रेकर्डिङभन्दा बढी अरु कार्यक्रमहरुमा पैसा र समय खर्च गरिरहेको छ। जस्तै कहिले शुभकामना सङ्गीत भन्छ र कहिले प्रतिभाको खोजी भन्छ। खोजेर पनि कहीँ प्रतिभा पाइन्छ? प्रतिभा आफैँ प्रस्फुटित हुने कुरा हो। त्यसैले प्रतिभा खोज्नेभन्दा प्रस्फुटित प्रतिभालाई जोगाउने र संरक्षण गर्ने काममा लाग्नुपर्छ।
आफ्नो साधनको राम्रो सदुपयोग गरेको भए यो संस्था आज निकै सफल र सार्थक हुने थियो। तर त्यहाँ पनि गिरोह नै हावी छ। आज राजनीतिक क्षेत्रमा झैँ साँस्कृतिक क्षेत्र पनि भूमिगत गिरोहबाट पीडित छ। चाहे रेडियो नेपाल हेर्नुस्, चाहे रत्न रेकर्डिङ, चाहे एकेडेमी– हरेक क्षेत्रको व्यवस्थापन केही स्वार्थी व्यक्तिहरुको गिरोहको प्रभाव र षड्यन्त्रमा फँसेको छ।
गीतको सफलता र असफलताको मूल्यांकन तपाईं कसरी गर्नुहुन्छ? दुइटा कुरा छन्। पहिलो हो, लोकप्रियता। अर्थात् जनताले ग्रहण गर्छन्, गर्दैनन्? दोस्रो चाहिँ गीतसम्बन्धी विशेषज्ञ वा आलोचकले मात्र थाहा पाउँछः प्राविधिक त्रुटि। कहिलेकाहीँ कुनै गीत गाइसकेपछि आफोलाई पनि लाग्छ कि यो गीत यसरी नगाएर यसरी गाउनु पथ्र्यो।
गायकलाई यस्तो लागे तापनि श्रोताहरुले त्यसतिर ध्यान दिँदैनन् र त्यो गीत लोकप्रिय हुन पनि सक्छ तर आफूलाई पछिसम्म खल्लो लागिरहन्छ। यस्तो गीतलाई म पूर्ण सफल भन्दिनँ। कुन गीतको क्यासेट कति बिक्री हुन्छ, त्यस आधारमा सफलता असफलताको मूल्यांकन गर्नु हुँदैन। जसरी साहित्यमा उत्कृष्ट कृति हुँदाहुँदै पनि बढी बिक्री घटिया स्तरका पुस्तकहरुको हुन्छ, साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ।
तपाईंभन्दा धेरै कान्छा गायक उदितनारायण झा बम्बई गई हिन्दी गीत गाई निकै नाम र सायद दाम पनि कमाए तर तपाईंले बाहिरबाट आएका कतिपय अफरहरु ठुकराई नेपालमै बस्ने अड्डी लिनको कारण के हो? हो, मलाई पनि हिन्दी गीत गाउन बम्बईबाट निम्ता आएको थियो र कोसिस गर्ने हो भने हिन्दी गीत राम्रैसँग गाउँछु पनि। तर म यो चाहन्नँ।
बम्बई गएर एकदुइटा फिल्ममा गीत गाउन सबैले दिन्छन्, तर ती गीत लोकप्रिय भए भने त्यहाँ दादागिरी गरेर बसेका गायकहरुलाई त्यहाँ टिक्न मुस्किल परिरहेको छ। महेन्द्र कपूर, यशु दास, शैलेन्द्र सिंहजस्ता गायकले पनि अब काम पाउन छोडेका छन्। म आफ्नो स्वाभिमान त्यागेर त्यहाँ गई अरुको चाकडी गर्न चाहन्नँ। म आज जे छु नेपाल र नेपालीले गर्दा नै छु र म यसैमा सन्तुष्ट छु। म ज्यादा धनी नभए पनि गरिब पनि छुइनँ र पैसा कमाउनु मात्र मेरो लक्ष्य छैन। हिन्दी फिल्ममा गाउने रहर मलाई पटक्कै छैन।
नेपाली गीत र सङ्गीतको स्तर झन्झन् गिर्न र नेपालीपन हराउन थालेको छ भन्ने भनाइसँग सहमत हुनुहुन्छ? छैन। मेरो विचारमा विगत दुई दशकयता नेपाली गीत र सङ्गीतको स्तर निकै बढ्दै आएको छ र हिन्दीको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति कम भएर गएको छ। २००७ सालपछिका गीतहरु सुन्नुस्, ठ्याक्कै हिन्दीको अनुवाद पाउनु हुनेछ– गीत, सङ्गीत र गायन पनि। रत्नदास प्रकाशका कतिपय गीतहरु जगमोहनले गाएको जस्तो लाग्छ। कसैकसैले त रेडियो नेपालमा हिन्दी गीत नै गाएका छन्। नेपाली सङ्गीत र गायनको क्षेत्रमा नेपालीपनको खास सुरुवात मित्रसेनको समयदेखि भएको हो।
२०१७ सालपछि यस क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आयो। फलस्वरुप आज हामी आधुनिक गीतको क्षेत्रमा निकै अगाडि बढिसकेपछि छौँ। हाम्रा धेरै गीतहरुमा नेपालीपन र मौलिकता प्रशस्त छ। २०१७ सालपछिको यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो। २०१७ सालमा ‘विदेशका नक्कल गरिएको’ राजनीति परिपाटी खारेज गरी ‘आफ्नै नेपालीपनमा आधारित र मौलिक’ व्यवस्था कायम गरिएकोले नै गीत र सङ्गीतको क्षेत्रमा यो परिवर्तन आएको महसुस गर्नु भएको छ? हैन, मेरो भनाइको आशय त्यो होइन। यो एउटा संयोग मात्र पनि हुनसक्छ।